Afaka Bac aho, dia niditra Service national, 15 000 fmg isam-bolana ny karama tamin'izany, tsy ampy fa dia niezaka nitady. Tsaroako ny fitadiavam-bola naka sary tamin'izany. Mbola pellicule 36poses, miditra anaty bodofotsy maizina, ao no ampidirina ny pellicule mba tsy ho faty ilay film ahodina voalohany, ka ilay 36 poses azahoana 40 na 41 poses, izany hoe efa tombony ilay 4 poses amboniny. Tsy maka sary olon-tokana be loatra, fa ireny sary miaraka ireny, satria pellicule pose iray ihany ny vidin'iny, nefa ampanasa sary mitovy ny olona 4 na 5 amin'ny sary.
Eny hatramin'ny varotra charbon nataoko daholo, satria nisy nampianatra ahy hoe, raha ampiasa vola, dia aza mampiasa vola amin'ny zavatra misy rano sy misy fofona, fa maninona hoy aho, ireny mora simba hoy izy, ka maty ao ny volanao kely io, olona efa matanjaka no miditra amin'ireny asa ireny hoy izy.
Dia nodinihako, fa ny charbon, marina fa maloto, nefa iny tsy misy fofona, tsy lena, sy tsy mety simba na tsy misy mpividy, azo tehirizina. Niezaka aho ny namboly hazo ho solon'ny hazo natao charbon.
Ankehitriny, noho ny ezaka nataoko no nahatafita ahy amin'ny fianarana sy ny fiariana, tsy mpanakarem-be aho, nefa koa tsy sahirana, mbola manana noho ny ray amandreniko aho, ezahiko ampitaina amin'ny zanako izay, mba tsy handalo ny nandalovako izy ireo, fa hanao ny tsara kokoa hatrany.
Amin'izao tsy matory aho mijery ny anampiako ny tanora sy ny firenena. Tsy ho ahy izany no hanaovako izao asa fanampiana ny Firenena izao. Tsy voninahitra no tadiaviko, betsaka ny efa hitako, tsy vola no tadiaviko, manana ny ampy amin'izany aho, ny zanako efa tafita avokoa, mihoatra noho ny vitako ny vitan'izy ireo, manohy ny azy izy sisa.
Tsy seza na fahefana no tadiaviko, betsaka ny efa hitako, fa nanome ahy ny ampy ny Firenena tamin'ny fianarana noratoviko, nandray bourse aho, na kely aza izy ireny dia zava-dehibe amiko satria ny Fireneko no nahatafita ahy, ka rariny raha mijery ny hafa aho, mijery ny tanora, mijery ny fireneko izay mety mila ny traik'efako sy ny fahaizako, izay izy no nanome ahy izany.
Nilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena aho, fantatro ny antony tsy nahazoako vato betsaka, fa dia anaty kilasin'ny zero virgule, tsy nahamenatra ahy izany, satria tsy nampiasa vola hakana fahefana aho, fa hevitra no entiko. Raha vola no hakana fahefana, dia tsy maintsy amerina ny vola lany izay naka fahefana tamin'ny vola. Tsy maintsy hiaro ny fahefana nalainy an-keriny, izay naka fahefana tamin'ny basy sy ny hery.
Izaho mahitsy resaka, izay fijaliako nitady vola izay ve, dia ho zaraiko mamaimaimpoana aminao, satria hoe tia tanindrazana aho? Ianao io milaza koa fa tia tanindrazana, maninona ianao tsy manome maimaimpoana ny volanao, fa satria ve izaho hilatsaka ho filoham-pirenena, dia izaho ihany no mila miala vola? Tsy aleo omeko ny vady aman-janako, anaovako trano sy orian'asa? Maro koa ny havako sahirana, tsy aleo zaraiko amin'ny havako?
Tsy hifampiatsara ivelatsihy isika, io toy ny hoe, izaho hitondra anao hihinana brochette, hiantoka ny lany rehetra, mety andany 200 000 ariary isika, nefa ianao na frais bus tsika 500 ariary tsy foinao, hanao j'aime amin'ity pub ty koa aza tsy vitanao, dia maninona moa zaho no tsy maintsy hiala vola be ho entoko akana fahefana hanavotana anao sy ny Firenena?
Mitsangana, mitadiava, andao hiaraka hanavotra ity Firenena ity, ny azoko antoka, dia izaho manana hevitra ampandrosoana aingana ny Firenena, efa nazavaiko daholo ny programako, ho anao no hitsanganako, ho anao no nilazako fa amin'ny alalan'ilay carte électronique, dia hisy crédit vary 150Kg, rano 15m3 ary éthanol 30 litres isam-bolana, isan-tokatrano ho azon'ny fianakaviana tsirairay. Hisy panneau solaire mitentina 1 500 000 ariary, izay averina 15 000 ariary isam-bolana, ao anatin'ny 10 taona, omena ny fianakaviana tsirairay.
Ho anao no nilazako fa azo atao tsara ny manome bourse ho an'ny mpianatra:
Ho anao no nilazako fa ny fanjakana no mandoa iray manontolo ny karaman'ny Service National miisa 4 000 000:
Bac+3 miakatra: 1 000 000 Ariary/mois
Bac - Bac+3: 500 000 Ariary/mois
Moins Bac: 200 000 Ariary/mois
Ary izay mpiasa privé, na tompon'andraikitra association na fikambanana, na pretra na masera, na pastera, izay miandraikitra ny fanabeazana, dia ny fanjakana no hameno ny karama efa raisiny hitovy amin'ny karaman'ireo service national ireo.
Ny fitsinjaram-pahefana dia asiana vola hiasany araka ny tokony ho izy:
Fonkotany 50% amin'ny hetra sy tetibolam-panjakana dia ho azy.
Efa nozaraiko teto avokoa ireo hevitra ireo, foiko ho an'ny Malagasy tsy mila tambiny, efa nomeko ny mpitondra ankehitriny, anjaran'izy ireo ny ampiasa na tsia ny hevitra. Tompon-tsafidy izy, any aminy ny fahefana hanao na tsia izay ho raisiny.
Tsy ho ahy izany fa ho an'ny Malagasy, ka raha tena vonona isika dia manome izay faran'izay vitako aho, na fahaizana, na traik'efa na vola, dia isika kosa mandray anjara amin'izay tandrify antsika, na dia mba clique j'aime sy partage fotsiny ihany aza.
Misy miteny fa tsy voatery ho filoham-pirenena dia afaka manasoa ny firenena, eny marina izany, fa efa betsaka ihany koa ny nataoko, ary tohizako ny vitako, fa hatreto ny Filoham-pirenena no ahafahana manova tanteraka ny fiainan'ny firenena, ny fiainako efa milamina, tsy anavesatra problema amin'ny maha filoha, raha izaho foana, fa ho anao no hitsanganako. Mahaiza mifidy amin'ny manaraka, sao ataon'olona fitaovana fotsiny.
Raha toa kosa moa isika miteny hoe, aleo ireo efa nitondra sy nanabado hatrany ihany no ho fidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena manaraka, dia samy tsara atsika fa ny ahy fiainako efa bien, vokatry ny atsembohako efa 30 taona lasa, ary tsy misy maha perte ahy na tsy ho filoham-pirenena aza.
Isika no maha Firenena ny Firenena, aza avela amidin'ny mpitondra ny Firenentsika. Mitsangana isika tanora, indrindra isika nianatra sy mahita ny zava-misy. Mijoroa. Aza maka fahefana an-dalam-be, fa amin'ny alalan'ny fifidianana ihany.
Anomboka androany ny fampielezan-kevitra ho ben'ny tanàna, mahaiza mifidy.